သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: 2009
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:34 PM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
+ ရှင်ထွေးနာသိန် +
နတ်တော်လ ရောက်ရန် ရက်အနည်းငယ်လိုသေးသော်လည်း.. ကိုယ်ရေးတဲ့ ပိုစ်တွေကို ကိုယ်မကြိုက်လို့ (ပူလောင်လာသလိုဖြစ်နေလို့).. အရင်လို ကဗျာတွေ၊ စာတွေ၊ မောင်.. တွေ :P ရေးပါဦးလို့ ပြောပြောနေကြတဲ့ မောင်နှမများအတွက် (အရင်လို နူးညံ့သောစာတွေလည်း မဖွဲ့နိုင်သေးလို့) ရှင်ထွေးနာသိန်ရဲ့ ရာသီဖွဲ့လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Comment by ဏီလင်းညို — November 13, 2009 @ 5:28 pm |Edit This
ကဗျာလေးကြားဖူးသလိုဘဲ… ။ ကျွန်တော်လည်းအစ်မရေးပေးသွားတဲ့စာကြောင်းလေးအဓိပ္ပာယ်ကိုသေချာစဉ်းစားမိတယ်။
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကြောင်းက တစ်နေရာရာကဖတ်မိတဲ့စာသားလေး..ကြိုက်လွန်းလို့ စိတ်ထဲအမြဲစွဲနေတာ..။
Comment by Evergreen Phyo — November 13, 2009 @ 9:16 pm |Edit This
အော်.. ပြောရင်းနဲ့မှသတိရပြီ.. Natasha Bedingfield ရဲ့ Soulmate သီချင်းထဲကစာသားလေး.. သူ့သီချင်းတော်တော်များများကြိုက်တယ်..။
Comment by Evergreen Phyo — November 13, 2009 @ 9:19 pm |Edit This
Comment by လင်းဦး(စိတ်ပညာ) — November 14, 2009 @ 11:04 am |Edit This
Comment by minthant2009 — November 14, 2009 @ 2:22 pm |Edit This
ရာသီဖွဲ့ ကဗျာလေး ပြန်ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ..
Comment by သိင်္ဂါကျော် — November 15, 2009 @ 1:28 am |Edit This
ကဗျာတော့မသိဘူး ဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ့ပြီး ဟက်စ်ထိသွားတယ် ကျနော်ရေးဖူးတဲ့ နေညိုချိန်ပို့စ်လေးနဲ့ ရာဇ၀င်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို လွမ်းမိလို့ :(
Comment by မောင်မျိုး — November 15, 2009 @ 7:29 am |Edit This
မလေးရေ … အဲဒီကဗျာလေး ဖတ်လိုက်ရတာ ပြည်တော်ကို လွမ်းသွားတယ်။ စစ်ကိုင်းတောင်နဲ့ ပုညရှင်ကိုလည်း သတိရသွားတယ်။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — November 15, 2009 @ 8:21 pm |Edit This
စစ်ကိုင်းပုညတောင်ကို အရမ်းလွမ်းသွားပြီအိမ့်ရေ… ဒီမှာလဲ မှိုင်းအုံပျပျ… ဒါပေမယ့် တစက်ကလေးမှ မလှ… လွမ်းလို့ လဲမရတဲ့ နတ်တော်မပီတဲ့လပါ…
Comment by တန်ခူး — November 16, 2009 @ 5:52 am |Edit This
အခုတစ်လော မလေး အပျင်းထူနေပါသဖြင့် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…. :)
Comment by မလေး — November 17, 2009 @ 12:45 am |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:30 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
မိုးကဖွဲဖွဲကလေးရွာလာပြီ။ အဆောက်အဦးအ၀င်ဝက ပန်းခြုံတွေကြားမှာ မြေတူးနေရာမှ လုပ်လက်စအလုပ်ကို အမြန်အပြီးသတ်လိုက်သည်။ ဦးထုပ်ကို ခေါင်းရှေ့ကို ပိုငိုက်အောင် ဆွဲချလိုက်ပြီး ပန်းခြုံကြားမှ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ခါးကိုဆန့်လိုက်သည်။ ဆောင်းဦးဝင်ပြီမို့ မိုးက ကျွတ်ဆတ်အေးခဲလာနေပြီ။ မြေပြင်မှာ ရောင်စုံသစ်ရွက်တွေ ပျံ့ကြဲနေသည်မို့ မကြာခင် သစ်ရွက်တွေကို ကြုံးရဦးမည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူလုပ်ရေကန်စိမ်းထဲက ရေညှိတွေက စိမ်းညိုရောင်သန်းနေသည်။ ရေကန်ဘေး နွံထဲမှာတော့ လိပ်ကလေးတွေ ငြိမ်သက်နေကြသည်။
အဆောက်အဦးအ၀င်ပေါက်ဝမှာ ဗော်လဗိုကားတစ်စင်းက အသံမမြည်ပဲထိုးဆိုက်လာသည်။ ပြောင်လက်တောက်ပနေသည့် ရှုးဖိနပ်ဝတ် လူတစ်ယောက်က ကားတံခါးဖွင့်ဆင်းလာသည်။ passernger seat မှ မိန်းကလေးကလည်း ကားအပြင်သို့ထွက်လာသည်။ ကားနားမှာ အနမ်းတစ်ခုကို အမြန်ဖလှယ်လိုက်ကြပြီး ရှုးဖိနပ်ဝတ်က ရုံးထဲသို့ တက်ကြွသောခြေလှမ်းများနှင့် ၀င်သွားသည်။ မိန်းကလေးက ကားကိုကျင်လည်စွာ မောင်းပြီးထွက်သွားသည်။ သည်လိုမြင်ကွင်းတွေက နံနက်ခင်းတိုင်းရဲ့ ရိုးအီနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ…။
သည်နေရာမှာ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ digital photography နဲ့ digital printing ကို ဦးစားပေးတဲ့ Kodak၊ ဘီစီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တစ်ခုလုံးကို ကိုင်တွယ်တဲ့ Blue Cross၊ နောက်ဆုံးပေါ် ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွေထုတ်တဲ့ Electronic Arts၊ metabolism disorder တွေကို ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ကုသရေးပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ Xenon Canada၊ စတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိသည်။
သူကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေသုံးတဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း နဲ့ medical isotope တွေထုတ်တဲ့ MDSကုမဏီဝင်းအတွင်းမှ ပန်းခြံအလုပ်သမားတစ်ယောက်။ မြေကြီးတွေ ပေပွနေသော၊ အမှိုက်သရိုက်တွေတွယ်ကပ်နေတတ်သော မိုးကာဖျင်အညိုရောင်ကြီးတဖားဖားဝတ်ပြီး သည် business park ၀င်းထဲမှာ လျှောက်သွားနေတတ်သော သူ့ကို မည်သူကမျှ သိပ်သတိထားမိကြမည်မထင်။ သည်ဝင်းထဲလျှောက်သွားရင်း သည်တံခါးဝနားတစ်ဝိုက်က ပန်းခြုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာခြေသံတွေကို သူလေ့လာနေခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ မ၀ံ့မရဲခြေလှမ်းတွေ၊ မအောင်မြင်လို့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီးထွက်လာတဲ့ ခြေသံတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်အင်တာဗြူးအောင်သွားလို့ ပျော်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ ခြေသံတွေ၊ ကျောင်းပြီးကာစ တက်ကြွနေတဲ့ ခြေသံအသစ်တွေ၊ မာနတွေကို သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ခြေသံတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုပြီး ကျောင်းကသင်ပေးလိုက်လို့ အားလုံးကို ပြောင်းပြန်မှောက်ခုံလုပ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အဟုန်တွေကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ ခြေသံတွေကို သူလေ့လာနေတတ်ခဲ့သည်။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:27 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
တောသားလေးက တက်ဂ် လို့ပါ…။
ပထမ ၂ပတ်မှာ သိပ်တွေ့ချင်တဲ့သူတွေကို အမြန်သွားတွေ့မယ်။ သိမ်းထားတဲ့စကားတွေကို ပြောမယ်။
ကျန်တဲ့ ၂ပတ်မှာတော့ သာယာလှပတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်လေးတစ်ခုမှာ မိသားစုနဲ့ တဲထိုးပြီးနေမယ်။ နောက်ဆို မမြင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင်ပြာနဲ့ တိမ်ဖြူတွေကို ငေးမယ်။ သဲပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး ကြယ်တွေကို မော့ကြည့်မယ်။ လေပြေရဲ့အထိအတွေ့ကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခံစားမယ်။ လှိုင်းပုတ်သံတွေကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နားထောင်မယ်။ ငှက်တွေပျံသန်းနေတာကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ငေးမောမယ်။ သိပ်လှတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဂါဝရပြု နှုတ်ဆက်မယ်။
ဒီလောက်လှပတဲ့ သဘာဝအလှတရားတစ်ခု အငွေ့ပျံပျက်စီးသွားမှာတော့ နှမြောမိမယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားတွေ အသုံးချနိုင်သလောက် အသုံးချပြီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဒီကမ္ဘာက၊ ပျက်စီးဖို့ အချိန်တန်တာ ကြာပါပြီ။ ဒီကမ္ဘာဟာ အစကတည်းက ထာဝရတည်နေမယ့် အရာတစ်ခု မဟုတ်ခဲ့လို့ သိပ်တော့ ပူဆွေးမနေပါဘူး။
ဘာမှ ပြင်ဆင်စရာကို မလိုတော့ပါဘူး။ ဘ၀မှာ လိုချင်တာ သိပ်များများ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုချင်တာ နည်းနည်းလေးတွေထဲက အကုန်နီးပါးလည်း ရခဲ့ပြီးပြီ။ လှူသင့်တာတွေလှူပြီးပြီ။ ပေးသင့်တာတွေ ပေးပြီးပြီ။ ကျေးဇူးဆပ်သင့်တာတွေ ဆပ်ပြီးပြီ။ ပေးဆပ်သင့်တာတွေ ပေးဆပ်ပြီးပြီ။ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံစားလို့ရသမျှ လူပီသစွာ ခံစားနေထိုင်ပြီးပြီ။ ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ လူသားတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမယ့်လည်း၊ တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်.. သေဆုံးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:25 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
အဲဒီနေ့က မနက်စောစောကတည်းက ဖရုံသီးလေးတွေလို၊ ပန်းပွင့်လေးတွေလို၊ နတ်သမီးလေးတွေလို၊ ကျားပေါက်၊ ဆင်ပေါက်စတဲ့ အကောင်ပေါက်လေးတွေလို ၀တ်ဆင်ထားကြတဲ့ ကလေးလေးတွေ လမ်းတွေပေါ်မှာ၊ ဈေးတွေထဲမှာ ဥဒဟို သွားလာနေကြတာကို မြင်တွေ့နေရတယ်။ အချို့အိမ်တွေ တော်တော်များများကလည်း အိမ်ရှေ့အ၀င်ဝမှာ ပင့်ကူမဲမဲကြီးတွေ တွဲလွဲခိုနေတဲ့ ပင့်ကူအိမ်အတုတွေ၊ အရိုးစု အရုပ်တွေ၊ အစွယ်ငေါငေါထွက်နေတဲ့ ပုံစံရအောင်ထွင်းထားတဲ့ ဖရုံသီးရုပ်တွေနဲ့ အိမ်တွေကို တန်ဆာဆင်ထားကြတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း တစ္ဆေကြီးပွဲ။ ဟိုးရှေးခေတ်တွေတုန်းက နွေရာသီကောက်ရိတ်သိမ်းပြီးကြရင် သူတို့ရဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေကို ၀ိညာဉ်တွေလာစားမှာစိုးလို့ ကြောက်စရာအ၀တ်အစားတွေဝတ်ပြီး ခြောက်လှန့်ကြတဲ့ celtic ဓလေ့ကနေ စတယ်လို့လဲ ဆိုကြတဲ့ ဒီတစ္ဆေကြီးပွဲက အခုခေတ်မှာတော့ ကလေးလေးတွေ တစ်အိမ်တက်ဆင်း သကြားလုံးလိုက်တောင်းတဲ့ ပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါပြီ။
နေ၀င်သွားလို့ လ ထွက်လာတာနဲ့ ရောင်စုံသစ်ရွက်တွေကြွေနေတဲ့ လမ်းတွေပေါ်ကို ၀တ်စုံပြည့်အ၀တ်တွေနဲ့ ကလေးလေးတွေထွက်လာပြီး အိမ်တံခါးကို လာခေါက်ရင်၊ သူတို့ကိုပေးဖို့သကြားလုံးတွေ ချော့ကလက်ပြားလေးတွေ ဈေးက သွားဝယ်အပြီး၊ သေဆုံးသွားပြီးတဲ့လူတွေ မြှုပ်နှံထားတဲ့ ပန်းခြံကြီးရှေ့က လမ်းမကြီးအတိုင်း အဲဒီနေ့က ဖြတ်ပြန်လာခဲ့တယ်။
လူသေတွေမြုပ်နှံထားတဲ့ ပန်းခြံကြီးက ဆောင်းရာသီအ၀င် အရောင်စုံပြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေအောက်မှာ တိတ်ဆိတ်စွာ ငြိမ်သက်နေတယ်။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:21 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ